Oodweyne news | Oodweynenews. 2020-02-25
Oodweyne news. Oodweyne Muqdisho News www.urgent-curier.ro
Oodweyne Muqdisho News www.urgent-curier.ro
Germany waxa ay dagalki 2 labad ee aduunka laga ganaxay koobki aduunka ila laga soo gaaray 1950. Markaa haddii uu qofku yahay qof afkiisa hooyo oo keli ah wax ku soo bartay ama aan afaf kale wax badani uga baxsanayn had dhow marka uu meelaha dhiganayaasha kala dudduwan lagu kaydiyo tago waxa uu noqonayaa sida qof cusub oo ku jira xaalad ku cusub oo in uu la jaanqaadaa ay adag tahay. Waqtigas oo ahayd 1974 markale gacantoda waxa kuso dhacday sanadi 1972 euro. Dhanka kale , waxa marar badan dhacda in shaqaalaha cusub ee la qaadanayo lagu xidho qodob ah in ay afafka shisheeye qaarkood wax ka yaqaannaan, ama shaqada lafteedaba ay dad dalal kala duwan u kala dhashay qofkii muwaaddinka ahaa kula tartamaan. Taariikh ahan marka lasoo hadal qaado xulka germany waxa jira dad fara badan oo xaada istaagto iyagoona dib gocosha macan ugala wayihi macana oo ay dunida kulahayeen iyo cayartoydii soo martaba. Gabooyelive News Oodwayne News Boorama News Aan ku celiyo ee ciddii haysa war la xidhiidha hanti-boobka dalka ka socta meel kasta mid wasaaradeed, gobol, iyo degmaba ii soo dir si aynu dadka ugu bayaamino, xogtana haya oo ilaaliya maalin ayaa iman dib loo xisaabtamo ee fadlan kayd adag galiya. Waxan dhidibada loo aasay xulkan sanadki 1900 iyagoona afar sano kadib qeyb kanoqday fifa.
Taariiqda xulkan intan way ka badan tahay lakin inti awoodeyda ahayd ayan kasoo qoray. Sidokale 1954 waxa ay haleelen koobkii aduunka iyadona uu waqtigas cabtan uu u ahaa fritz wilter. Xuska sanadkaan ayaa kusoo beegmaya iyadoo 59% caru. Dadweynaha ku dhaqan dalka Masar ayaa si weyn u cambaareeyay Xukunkan, waxayna sheegeen in Maxamed Xusni Mubaarak uu mudnaa in lagu Xukun dal dalaad ah maadaama uu ahaa Dhiigyo cab iyo Naxriis laawe Xasuuqay Shacabkiisa. Haddii aan sidaa wax u qoro, waxa laga yaabaa in ay dad badani ii arkaan nin aan waxba garanayn! Xul walba oo xulalka aduunka kamid ah hadi labo dhinac uu kadhisan yahay waxa lagu tilmama libaax.
Somali Links - Camaloow Allsomalimusic Agoonta. Afku waa muraayad laga eegi karo dhaqanka, murtida iyo waayo-aragnimada ay ummadi leedahay. Iyada oo ay sidaas tahay ayaa haddana maanta af qalaad oo la barto baahi weyn loo qabaa. Aqoontu waxa ay ka kooban tahay laamo kala duwan oo mid walba goonnideeda loo barto. Sida si lamid ah waxa iskadaba imaanayay xidigaha magaca kudhex leh dalkasi kuwa oo kal ahaa. Saturday, 04 April 2009 13:27 Magaalada Muqdisho ayaa 24-kii.
Afafka Qalaad iyo Aqoonta • www.urgent-curier.ro Oodweyne News
Xulkani germalka waxa iyagu isku soo dhaar sadan tiigsashada rubac dhamadka iyo in cidi inta wixi kahoreysa ay is qabtana afarley goolal ah afka ugu subagto. Murti qalaad ayey dulucdeedu u dhoweyd in af cusub oo la bartaa ay ka dhigan tahay sida nolol cusub oo soo korodhay oo kale. Waxa la sheegaa, haddii uu qofku barto af aan kiisa ahayn in uu qofkaasi noqonayo sida qof ay daaqad cusubi u furantay oo kale; daaqaddaas oo uu ka eegi karo waxyaalo markii hore ka qarsoonaa. Afkuna waa ereyo, weedho iyo codad la isku daray oo ay bulsho meel wada deggani ku wada xidhiidho iskuna fahamto. Rasaas culus oo ay labada dhinac isdhaafsanayeen ayaa laga maqlayay Ceelasha Biyaha oo ah deegaan inta badan ee dadkii faarujiyeen. Sanadadi ugu dambeysay kaso bilaw 1990 tani iyo waqtigan waxa ay noqden kuwa boosas fiican ka istaaga koobabka caalamiga ah waxa ayna suuqyada caalamka garoomada kuyaal xulal sharaf isbidayay.
Waxa ay u kala baxdaa mid diini ah iyo mid maaddi ah oo uu aadamigu nidaamiyo oo tijaabooyin ama barasho ama baadhis ama intaas oo la isku darayba lagaga bogto. Madaxweyne siilaanyo iyo qorba-joogga jsl oo ku kulmay cawayska ramadaanta Madaxweyne siilaanyo iyo qorba-joogga jsl oo ku kulmay cawayska ramadaanta, madaxweyne siilaanyo iyo qorba-joogga jsl oo ku kulmay cawayska ramadaanta, madaxweyne siilaanyo iyo qorba-joogga jsl oo ku kulmay cawayska ramadaanta, Somaliland Patriots News Somaliland News madaxweyne siilaanyo iyo q. . Maantana dad aragtidaas oo kale qabaa waa ay jiraan waana ay badan yihiin. Haddii aynu ujeeddada soo dhoweyno, hawlo waxbarasho ha ku jiro ama shaqooyin kaleba gacanta ha ku hayo ee qof kasta oo maanta wax uun qabanayaa marna af qalaad ka maarmi kari maayo. Waayadan danbe waxaba la yidhaahdaa, qofka hawlaha waxbarasho ku jiraa in uu afkiisa ma ahee, laba af oo kale wax ka yaqaanaa waa arrin fiican oo waxtar leh.
Dad badan aya yirah xulka germalka waa xul lagu tilmamo hooyadi reer yurub dhanka isboortiga taana waxa adkeyneyso biladaha kuxar dhan xabadka cayartoydas hatan waxa ay uso talabtay rubac dhamadka koobka horyalada yurub waxa ayna isku beegan yihiin talyaniga oo cara weyn ay uqaban kaa oo sama finale koob aduun kasoo cirib tiray shekada lagu qoslase waxa ay tahay germalku ma sidii guruubyada uu usoo halaajiyay miya la oran doona dooli bood boodkiis wa mukalaal xanaaqeed mise talyaniga jawan madoobe goolalaha oo uu wakiil uga yahay gool haye buffon aya lagu amal marin doona horese somalida waxa ay utiri farda la isku haayo la iskuma faansho. Ninkii markii uu sheekadii dhammeeyey waa uu iska tegey. Iskoora badan aya dunida uga yal kan ugu cansana waxa uu yahay 10 kulan 10 guul taa oo aysan hora ujirin cid mid lamid ah horay udhigtay. Waxana shanta farood ugu jira koobab tiro ahan lagu qiyaso 6 koob oo sadaxi ay tahay euro halka sadaxda kalena ay tahay world cup ama koob aduun cidba siday ugaraneyso. Odayaasha dhaqanka ee ku sugan melaha e ka taliyaan Xarakada Alshabaab ayaa warkasoo saaray xaalada Somaaliya gaar ahaa shirarka dibadda lagu qabato. Markaa baahida af qalaad garashadiisa loo qabaa waa mid mar walba joogto ah.